5 WWE masuo ekupinda pakutanga aireva mumwe munhu - Wwe
5 WWE masuo ekupinda ayo anga achiitirwa mumwe munhu
# 5. Brodus Clay's WWE yekupinda theme - 'Mumwe Munhu Anodaidza Amai Vangu' (yakagadzirirwa Ernest 'The Cat' Miller)
Muna 2012, mavignettes akatanga kuburitsa paWWE programming, achitsvaga mukuru webasa rekutanga raBrodus Clay (iye pakutanga akange aonekwa saAlberto del Rio muchengeti paakange ari pachinyorwa chekutanga cheNXT). Aya mavhidhiyo mapakeji aireva kuti chikara chinotyisa chaive choda kusunungurwa uye kuti vese veWWE vaifanira kungwarira.
Nekudaro, paakatanga kukakavara, zvinhu zvakange zvisingatarisirwe kutaura zvishoma.
Kune wewrestling ari kubhadhariswa se 'Funkasaurus,' zvaizoita kunge ichi chingave chakagadzirwa-chakagadzirwa chekupinda theme rwiyo. Kunze kwekuti yakanga isiri.
Rwiyo rwacho rwakamboshandiswa kuna Ernest 'The Cat' Miller, aimbove nyeredzi muWCW. Rwiyo rwekupinda nenziyo rakafananidzwa neake iconic catchphrase ... zvakanaka, unogona kufungidzira kuti chaive chii.
Zvinosuruvarisa, basa raMiller harina kubuda muWWE sezvayaifanira kuve. Brodus Clay paakada rwiyo rwemusoro wekumubatsira kutamba nzira yake kuenda kumhete, Ernest Miller akasiya banger yenziyo yainyatso kukodzera iye zvino-Fox News muongorori.
Kana iwe usingazive, Brodus Clay - ava kunzi Tyrus - ndiye mugamuchiri uye muongorori weFox Nation, Fox News's online service. Nekudaro, uyu mukova wakashamisa nekukurumidza. Ngatipfuurirei mberi.
KUMASHURE MBERI 2/6ZVINOTEVERA
sei kumira kuyamwa muhupenyu
mutsauko uripakati pebonde nerudo
zvekuita kana iwe uchinetseka nehupenyu
zvinonakidza zvinhu zvekuita kana usina shamwari
michael myers mafirimu akarongeka
Lisa vanderpump mambure akakosha 2021